Flatbed Laser tingcha Machine - Golden Laser
Anyị ọhụrụ usoro nke CO2 flatbed laser ọnwụ igwe e mere na-nnukwu format, elu na-agba, elu nkenke na elu akpaaka.
Sistemụ arụmọrụ nke usoro ụlọ ọrụ, sistemụ ngwa anya, yana sistemụ njikwa na-ahụ oke ọsọ na nkwụsi ike dị elu nke igwe igwe laser. Gear & rack chụpụrụ na servo Motors na-enye nkenke mmegharị na ruo 8000mm / s2 osooso.
A dị iche iche nke na-arụ ọrụ formats dị, nke nwere ike n'ụzọ dị irè dabara nhazi mkpa nke dị iche iche ụlọ ọrụ na nkọwa. Anyị nwekwara ike ịhazi usoro ịkụcha adabara maka mkpa nrụpụta akọwapụtara.
CO2 DC iko laser tube ma ọ bụ RF metal laser tube bụ nhọrọ dị ka ụlọ ọrụ na nhazi chọrọ. Anyị nwere ike iji 80 watts, 130 watts, 150 watts, 200 watts, 300 watts, 600 watts, 800 watts na ọbụna ike dị elu CO2 laser nwere ike ịnweta igwe mpempe akwụkwọ laser anyị.
Nodị No.: JMCCJG / JYCCJG Usoro
Ezubere usoro a maka CO2 flatbed laser ọnwụ igwe maka akwa akwa na-agba na ihe ndị dị nro na-akpaghị aka ma na-aga n'ihu. N'ịgba site gia na ogbe na servo moto, laser cutter awade kasị elu ọnwụ ọsọ na osooso.
Nodị No.: JMCCJG-350400LD
Nodị No.: JMCCJG-250350LD
Airbag Laser tingcha Machine na Multi-oyi akwa Auto feeder
Ihe ngwọta nke Goldenlaser raara nye laser ịcha ikuku na-eme ka ịdị mma, nchekwa na ịchekwa, zaghachi na mmụba na ntụgharị nke airbags chọrọ site na ụkpụrụ nchekwa ọhụrụ.
Nodị No.: JMCCJG-160200LD
CO2 Laser cutter maka kpara Okpomọkụ Shrinking Protection uwe
Laser cutter karịsịa maka kpara okpomọkụ shrinking nchedo aka nke PET (polyester) eriri eri na shrinking polyolefin emep uta. Ọ dịghị fraying nke ọnwụ n'ọnụ n'ihi na oge a na laser ọnwụ.
Nodị No.: JMCZJJG (3D) -250300LD
A Nchikota nke nnukwu format X, Y axis laser ọnwụ (trimming) na elu na-agba Galvo laser perforating (laser ịkpụ oghere). Ezubere ya maka ịcha nke ikuku ventilashion (sock duct, sox duct, duct sox, sock duct, textile air duct, sock air, sox duct)
Nodị No.: JYCCJG-160600LD / 160900LD / 1601300LD
Extra Long ịcha Bed - Ọpụrụiche 6 Mita na 13 Mita akwa akwa maka ihe ndị ọzọ toro ogologo, dị ka ụlọikwuu, akwa akwa, parachute, paraglider, canopy, marquee, okwuchi windo, parasail, sunshade, ụgbọelu ụgbọelu…
Nodị No.: JMCCJG-250300LD
CO2 Laser tingcha Machine maka Nka na ụzụ Textile
The gia & ogbe akwagharị laser ọnwụ igwe bụ ike ịrụ a elu ike CO2 laser tube. Ọ matara ibu elu osooso ọsọ na ọnwụ ọsọ na-efe efe Gbasara Anya.
Nodị No.: NJJJ-210300LD
Kapeeti Laser tingcha Machine
Kapeeti laser ọnwụ igwe nke na-abụghị kpara, polypropylene eriri, blended ákwà, leatherette na ndị ọzọ carpets ọnwụ. Ebufe na-arụ ọrụ table na akpaaka nri. ọnwụ na-aga n'ihu ọnwụ.
Nodị No.: NJJ-230230LD
Laser Cutting Machine maka naịlọn, Polyamide, faiba glaasi, Nonwoven
Igwe akụrụngwa laser a dabara adaba maka ịkpụ ọtụtụ ihe dị nro gụnyere akwa, gaskets, akwa mkpuchi mkpuchi akwa, na teknụzụ teknụzụ maka ọtụtụ ngwa sitere na ụlọ ọrụ ntinye na ndị ọrụ ụgbọ ala na ndị agha.